Izincwadi ezisuselwa kumicimbi yangempela esiyincomayo | Izincwadi Zamanje
Lapho ukhetha incwadi kunezinhlobo eziningi zemibhalo ongakhetha kuzo. Kodwa-ke, enye yazo "amaqiniso angempela." Lokho wukuthi, sikhuluma ngezincwadi lapho kukhulunywa khona ngendaba eyenzekile empilweni yangempela. Lezi zincwadi ezisuselwa kwimicimbi yangempela zinomthelela ngoba wazi okuthile okwenzekile ngempela.
Eqinisweni, singathola inqwaba ye- izibonelo zezincwadi ezisuselwa emicimbini yangempela, ezinye zaziwa kangcono kunezinye. Ngabe ufuna ukwazi ezinye zazo?
1 Izincwadi ezisuselwa ezenzakalweni zangempela, zihlala zithembekile yini ngokwenzekile?
2 Izincwadi ezinhle kakhulu ezisuselwa kwimicimbi yangempela
2.1 I-Orange yumnyama omusha
2.3 Izincwadi ezisuselwa kumicimbi yangempela: I-Horror ihlala lapha
2.4 Igazi elibandayo
2.5 Izincwadi ezisuselwa kumicimbi yeqiniso: Ukuthanda
2.6 Idayari ka-Ana Frank
2.7 Izincwadi ezisuselwa kwimicimbi yangempela: I-Monster yaseFlorence
2.8 Amantombazane ocingo
2.9 Izincwadi ezisuselwa kwimicimbi yangempela: I-Exorcist
2.10 Ingoma emnandi
Izincwadi ezisuselwa ezenzakalweni zangempela, zihlala zithembekile yini ngokwenzekile?
Siyaxolisa ukukutshela ukuthi ayikho impendulo elula yalowo mbuzo. Isizathu ukuthi kuncike encwadini ngayinye, ukuthi ibhalwa ngubani, nokuthi inhloso kangakanani ... Incwadi ebhalwe kumuntu wokuqala ngumuntu obuke lo mcimbi ayifani nomuntu owake wawuphila.
Futhi, kufanele wazi ukuthi kwesinye isikhathi le ndaba ithanda ukuxoxwa ngendlela izehlakalo ezingazange zenzeke ngayo njengoba kuchaziwe encwadini, kepha yiyona esondelene kakhulu neqiniso (ngoba sikhuluma ngezincwadi ezisuselwa emicimbini yangempela). Kufanele uqonde ukuthi le misebenzi iyinhlanganisela yenoveli, yamaphoyisa kanye nophenyo lobuntatheli, nolwazi lomuntu oyedwa. Kukhona umugqa omuhle phakathi kwazo zonke ongazenza ukuthi kunemininingwane efakiwe kepha empeleni eqinisweni uqobo lwayo bekungabalulekile, noma imininingwane ukuze umfundi angalahleki.
Vele kuzoba khona izincwadi ezingokoqobo kunezinye. Ngakho-ke, uma uthanda lolu hlobo, oluxhuma izinkulungwane zabantu, khona-ke siphakamisa ezinye izincwadi.
Izincwadi ezinhle kakhulu ezisuselwa kwimicimbi yangempela
Phakathi kwabo, sifuna ukuncoma okulandelayo:
I-Orange yumnyama omusha
I-Orange Is the New Black: ...
Lo msebenzi kaPiper Kerman, owabhalwa ngo-2010, uzokutshela indaba, kumuntu wokuqala, ngoba iyingxenye yomlando womuntu wesifazane, uPiper Kerman, ulahlwe yicala lokushushumbisa izidakamizwa nokushushumbisa imali. Kodwa-ke, ngaphezu kokukutshela ukuthi kungani agcine lapho, gxeka ukuthi ziphathwa kanjani iziboshwa nokuthi uhlelo lwezomthetho lunjani ezweni.
Kungenzeka ukuthi uke walubona uchungechunge lweNetflix (olwaphuma ngo-2013) nokuthi kwaba yimpumelelo enkulu.
Ibhalwe ngu-Isabel Allende, indaba ozoyithola phakathi kwamakhasi ayo ngeyakhe indodakazi yakhe, egula i-porphyria futhi ekhubazekile. Ngalesi sizathu, utshela ukuthi umama ubhekana kanjani nenkinga yendodakazi yakhe nokuthi ibathinta kanjani bonke abantu axhumana nabo.
Izincwadi ezisuselwa kumicimbi yangempela: I-Horror ihlala lapha
Lapha Phila Okuthusayo. I ...
Ibhalwe nguJay Anson ngo-1977, Uzohlangana no ukuhlanganiswa kwakho konke okwaziwayo ngokubulawa kwendlu eqalekisiwe e-Amityville, indawo lapho umndeni wawuhlala khona futhi uthi bezwa amazwi futhi bezwa ubukhona obabaphoqa ukuthi baziphathe ngezindlela ezazijwayelekile. Eqinisweni, uma ufuna ukwazi okwengeziwe, kunezindaba eziningi ngokubulawa okwenzeka kulezo zindlu, kanye nama-movie asuselwa endabeni eyiqiniso.
Kulokhu, nasi ukuhlanganiswa kwalokho okwaziwayo ngemicimbi yangempela eyenzeka ngama-70s.
Egazini elibandayo: 26 ...
Phakathi kwezincwadi ezisuselwa kwimicimbi yangempela, Le evela kuTruman Capote kufanele ibe nayo. Futhi ngukuthi ilandisa ngendaba yokubulawa kwabantu okwenzeka edolobheni laseHolcomb ngo-1959. Empeleni, umbhali wayeyithanda kakhulu le ndaba waze wathuthela edolobheni wayohlala isikhashana lapho ukuze akwazi ukuveze futhi ngangokunokwenzeka emlandweni wayo.
Izincwadi ezisuselwa kumicimbi yeqiniso: Ukuthanda
Ubuhlanga, Ubulili, kanye ...
Le ngenye yezincwadi ezingaziwa kakhulu ngokususelwa kumicimbi eyiqiniso, kepha ingakunika umbono wokuthi abantu bebala bakwenze kanjani ukubandlululwa kwabo. Esimweni esinjalo, le ndaba isitshela ngempilo kaMildred Jeter noRichard Loving, umbhangqwana owashada eWashington ngawo-50.
Bobabili babenombala ohlukile, futhi ngaleso sikhathi, ngobunye ubusuku bagcina beboshiwe, ngenxa nje yokuba nombala wesikhumba ohlukile phakathi kwabo. Yazi ukuthi imishado exubekile yayingavunyelwe eVirginia.
Idayari ka-Ana Frank: ...
Le ncwadi, ebhalwe ngumlobi wayo u-Anne Frank, empeleni iyidayari ayibhalele usho ukuthi impilo yakhe yayinjani nokuthi umndeni wamaJuda wawuphila kanjani ngesikhathi amaNazi ethatha iHolland.
Khumbula ukuthi wayibhala lapho eseneminyaka eyishumi nantathu ubudala, kodwa indlela yokulandisa nokuthi uzwela kanjani futhi uzizwe ukuthi leyontombazane ibiphila izamazama kakhulu. Vele, kuyisikhathi esifushane nje, kusuka ku-1942 kuya ku-1944.
Izincwadi ezisuselwa kwimicimbi yangempela: I-Monster yaseFlorence
Isilo saseFlorence: ...
Ungacabanga ufunda incwadi ekhuluma ngombulali obulalayo? Yebo, yilokho ozokuthola lapha, enye yezincwadi ezisuselwa kwizigameko zangempela ezixoxa ngendaba yombulali waseFlorence owethusa abantu iminyaka engama-20.
Wenzeni? Wathanda hlaba imibhangqwana ezindaweni eziqhelile, selokhu beye kulezo zindawo beyokwenza imisebenzi yocansi. Ngakho-ke, wabekwa amacala okubulala kabili.
Amantombazane ocingo ...
Ibhalwe nguJordi Sierra i Fabra, iyincwadi eshoyo yini engabonakali ezweni lezemfashini, Okusho ukuthi, konke okwenzeka ekusithekeni, ingcindezi ifakwa kanjani kumamodeli, ukuhlukunyezwa, izidakamizwa, izifo ...
Indaba ibhaliwe, futhi izuze umsebenzi othinta labo abayifundayo, kodwa futhi oheha ukunakwa. Ngaphezu kwalokho, kusenza sicabange ukuthi, njengoba kwenzeka nje emhlabeni wezemfashini, kungenzeka nasemhlabeni wethelevishini, kumabhayisikobho, ezincwadini, njll.
Izincwadi ezisuselwa kwimicimbi yangempela: I-Exorcist
Ibhalwe nguWilliam Peter Blatty, ilandisa i- Indaba eyaziwa kakhulu ngaphakathi kohlobo olwesabekayo. Incwadi yagqugquzela le filimu, njengoba yayilandisa ngezehlakalo ezenzeka ngo-1949, lapho intombazane eneminyaka engu-12 yayiphethwe usathane. Umndeni wakhe bekufanele ubize umuntu okhipha amadimoni ukuze amkhiphe yize, njengoba wazi, bekukuningi kakhulu.
Ungacabanga ukuthi uqasha izinsizakalo zomuntu ogcina ingane bese kuthi ngelinye ilanga uthole izingane zakho zifile? Yebo, lena yingxabano uLeila Slimani ayisebenzisayo ukutshela izehlakalo zangempela ezenzeka encwadini yakhe.
La Igama likaNanny kwakunguYoselyn Ortega, futhi wabulala izingane ezimbili. Encwadini, umbhali usitshela indaba yabazali, ukuthi bamqasha kanjani, bahlala naye futhi baqala ukubona ukuthi isimilo sakhe sasiguquka kuze kube yilowo mphumela obulalayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izincwadi ezisuselwa kwimicimbi yangempela